Nabadsugidda oo Xiisad Xooggan ka dhex jirto, kadib markii la eryay Taliye Awood badan ku dhex lahaa Hay’adda. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Dec 15, 2017
Taliska Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhex jirto Xiisad xooggan, kadib markii si aan Sharci ahayn Shaqada looga joojiyay Taliyihii Howlgaladda NISA.
Jacfar Abuukar oo ka mid ahaa Saraakiisha ugu firfircoon NISA ayaa Xilka laga qaaday, kadib markii uu diiday inuu wax amaro ah ka qaato Ku Simaha Taliyaha NISA, Jaamac. Waxaana Xil ka qaadistiisa lagu sababeeyay inuu diiday inuu Weeraro Goobo Shacab oo ay doonayeen inay Jaamac iyo Saadaq Joon inay sifo aan sharci ahayn dad uga barakiciyaan, iyo inuu soo xir xiro Saraakiil iyo Masuuliyiin Dowladeed.
Jacfar ayaa tiro ka dhowr jeer loogu yeeray Taliska NISA si loogu cadaadiyo inuu weeraro Haantadhoowr oo ay dagan Qoysaska Askar Milatari ah, isagoona diiday inuu hor kaco Weerarkaasi, Waxaa sidoo kale lagu amray inuu weeraro Guryo ay dagan yihiin Xildhibaano iyo Masuuliyiin Dowladadeed, taasoo iyana uu diiday, maadaama aan loo keenin Warqad Maxkamadeed oo awood u siinaysa Howlgalo noocaas ah.
Kadib markii uu Jacfar diiday Howlgallo aan sharci ahayn oo la faray inuu fuliyo, wixii ka yimaadana uu Masuuliyada isagu qaadi lahaa lahaa, waxaa la saaray caqabad xooggan, iyadoo laga curyaamiyay Dhaqaalihii loogu talagalay Howgaladda, sidoo kale waxaa lagu dhibay Saadka, balse Jacfar dhamaan caqabadahaasi wuu maareeyay, waliba si shaqsi ah ayuu isku xaliyay.
Ugu dambayn waxaa Jacfar lagu wargaliyay inuu qayb ka mida Ciidamadda ku wareejiyo Saadaq Joon oo Madax ka ah Taliska Gobalka Banaadir, balse Taliye Jacfar waxa uu u sheegay Ku Simaha Taliyaha in arrintaasi aysan ahayn sharci, haddii la doonayo inuu Ciidan siiyo Taliyaha Gobalkana loo soo maro hab sharci ah.
Ku Simaha Taliyaha NISA ayaa ugu dambayn xalay ka hadlay Isgaarsiinta Ciidanka, dhamaan Taliyayaashii ka hoos shaqaynayay Jacfar-na u sheegay inay hadda kadib la shaqeeyaan Col Aadan Dheere oo ka mid ah Saraakiisha NISA, mana uusan sheegin in Xilka laga qaaday Jacfar iyo in kale. Waxaana Jacfar oo illaalinaya Nidaamka Shaqadda uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo Talaabadda Sharci Daradda ah ee uu qaaday Jaamac.
Ku Simaha Taliyaha NISA, Jaamac oo horay uga mid ahaa Kooxda Alshabaab waxa uu Xilkan ka qabtay markii la eryay C/laahi Sanbaloolshe, isagoona illaa iyo hadda ah Ku Sime.
Ma cadda siday ku suurtagali karo xil ka qaadista Jacfar, Maadaama aysan hadda lahayn NISA Taliye rasmiya oo awood u leh Xil ka qaadis iyo Magacaabis, Waxayna Awoodda Ku Sime ku egtahay inuu Shaqadda sii waddo oo kaliya, isagoo aan isbadal ku samayn karin hab maamulka Hay’adda.
Jacfar oo Xilal kala duwan ka soo qabtay Dowladda Somalia waxa intii uu joogay NISA uu isbadal xooggan ka sameeyay Howlaha Ciidanka NISA.
Alshabaab oo Sheegtay Inay Dileen Wiil uu dhalay Muqtaar Rooboow